Sara Ramirez: ရိုလာကိုစတာ (နိမ့်မြင့် ချားရဟတ်) - English-Video.net
Most recently, Ramirez co-hosted and performed at TED Talks Live on PBS, and produced two films: Loserville (released in fall 2016 in partnership with the Pacer Foundation's Center for Bullying Prevention & Stomp Out Bullying) and the virtual reality film experience Out of Exile: Daniel’s Story, an Official Selection Sundance Film Festival and Lumiere Award nominee directed by Nonny de la Peña. Her next executive producing project is The Death and Life of Marsha P. Johnson,adocumentary by filmmaker David France of How to SurviveaPlague about LGBTQ civil rights transgender pioneers Sylvia Rivera and Marsha P. Johnson.
Sara Ramirez: ရိုလာကိုစတာ (နိမ့်မြင့် ချားရဟတ်)
အဆိုတော် သီချင်းရေးသူနဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး Sara Ramirez ဟာ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များစွာရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါ။ ဂစ်တာတီးခတ်မှုမှာ Michael Pemberton နဲ့ ပူပေါင်းကာ Ramirez ကနေပြီး အခွင့်အလမ်း၊ ဉာဏ်ပညာနဲ့ ဘဝရဲ့ အနိမ့်၊ အမြင့်တွေအကြောင်း သူမရဲ့ သီချင်း (ချားရဟတ်) Rollercoaster ကို ဒီတိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေမှုမှာ သီဆိုထားပါတယ်။
Broadway and TV veteran Sara Ramirez challenges stereotypes even as she beguiles audiences. Full bioMichael Pemberton - Actor, singer/songwriter
Michael Pemberton isaNew York-based actor and singer/songwriter. Full bio
လူတွေက မင်းကိုပြောကြတယ် ဒီတစ်ခုက
နောက်ဆုံး လမ်းပေါ်မှာ ရောက်သွားတယ်။
ဒါနဲ့ တစ်နေ့ မင်းနိုးလာပြီး
သူတို့ မင်းကိုပြောတာက "မင်းဟာ ဘုရင်မ"တဲ့
ဒါပေမဲ့ နောက်မှာ သိရတာက အခြားတစ်ယောက်က
ဒါပေမဲ့ မင်းစိတ်တိုတယ် (သို့) တင်းသွားတယ်
သူတို့ မင်းကို အကြွေစေ့လို ပစ်ချလိမ့်မယ်
ကဲ ကိုယ်ဟာ အဆိုးမြင်သူ ဖြစ်လောက်တယ်
ဒါပေမဲ့ အတွေ့အကြုံက ကိုယ့်ကို
ဒါပေမဲ့ သတိဟာ မင်းတို တုံ့နှေးစေပြီး
ပေးဆပ်မှုကို ဘယ်တော့မှ မတွက်နဲ့
ရေး ရေး ရေး
Michael Pemberton ပါ။
Sara Ramirez: ရိုလာကိုစတာ (နိမ့်မြင့် ချားရဟတ်) | TED Talk | TED.com